बस दुर्घटना हुनुअघि ड्राइभरले भनेका थिए : झ्याल–ढोकाबाट हाम्फाल्नुस् ! – ईमेची डटकम
बस दुर्घटना हुनुअघि ड्राइभरले भनेका थिए : झ्याल–ढोकाबाट हाम्फाल्नुस् !
काठमाडौं– सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौताराकी सल्फु श्रेष्ठ दशैंको टीका लगाउन दिदीको घर जाँदै थिइन् ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–९ को सिपाटारबाट काठमाडौंका लागि छुटेको बा २ ख २७१५ नम्बरको बसमा थिइन् उनी । दशैंको समय काठमाडौं फर्किने तथा दशैंको टीका लगाउन आफन्तकोमा जाने यात्रु बसभित्र खचाखच थिए ।
श्रेष्ठले बल्लतल्ल ड्राइभरको पछाडिपछिको सिटमा बस्ने ठाउँ पाएकी थिइन् । बस सोही गाउँपालिकाको भोटसिपाको ओरालोमा आइपुगेको थियो । ओरालोमा आएपछि बसबाट फुस्स आवज आयो, चल्दाचल्दैको बस रोकियो ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं १० भोटसिपास्थित बडहरेचोकमा शुक्रबार बस दुर्घटनमा परी घाइते भएकाको उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल ल्याइएपछि गाडीबाट ओराल्न सहयोग गर्दै काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी प्रमुख जयराज सापकोटा ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका १० भोटसिपास्थित बडहरेचोकमा भएको बस दुर्घटनमा परी घाइते भएकाको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेका घाइतहरुको अवस्था बुझदै प्रदेश नं. ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं १० भोटसिपास्थित बडहरेचोकमा शुक्रबार भएको बस दुर्घटनामा परी घाइते भएकाको बनेपास्थित शिर मेमोरियल अस्पताल बनेपामा उपचार हुँदै ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका १० मा भएको बस दुर्घटनामा परी बसचालक महाजु सहित १२ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी ६० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । श्रेष्ठ पनि सो बस दुर्घटनाका घाइते हुन् । श्रेष्ठको टाउकोको पछाडि भागमा चोट लागेको छ । उनी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको आकस्मिक सेवा विभागमा उपचारत छिन् ।
घाइतेहरुको धुलिखेल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घाइतेमध्ये १३ जनालाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएको छ ।
ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएका १३ जना घाइतेमध्ये ४ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी अर्जुन भेटुवालले बताए ।